WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: ကုန်းဘောင်ဆက် ဗမာ့တပ်မတော်
ပင်လယ်မြို့မြို့စားမင်း မင်းကြီးမဟာ မင်းဒင်ရာဇာ ဦးချုံ။
ကုန်းဘောင်ဆက် ဗမာ့တပ်မတော်ကို ရွှေဘိုမြို့ပဌမ မြို့ တည်နန်းတည် အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ က ရွေးလက်ျာ၊ ရွေးလက်ဝဲ အမည်ဖြင့် ဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။ မင်းတရားကြီးသည် ၁၁၂၀ ခု၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် ရွှေဘိုမြို့ တော် နန်းတော်ထဲတွင် လက်ဝဲပျံချီကို သွေးသောက်ကြီးခန့်၍၊ ရွေးလက်ဝဲ၊ ရွေးလက်ျာ၊ သေနတ်သုံးဆယ့်နှစ်၊ သွေးသောက်တပ်ဖွဲ့ တော်မူသည်။ ရွေးလက်ဝဲသေနတ်ပို အစုသားတို့ ကို လက်ဝဲနံတွင် နံချွန်တော် အမှတ်ပေး ၍ ထမ်းရွက်စေခဲ့၏။ ရွေးလက်ျာ အစုသားတို့ ကို လက်ျာနံတွင် နံချွန်တော် အမှတ်ပေး ၍ ထမ်းရွက်စေခဲ့ပါသည်။ (ကုန်းဘောင်ဆက်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး ပဌမတွဲ စာမျက်နှာ ၂၉၇ ရှုပါ။)
ရွေးလက်ဝဲ တပ်ဖွဲ့ နှင့် ရွေးလက်ျာတပ်ဖွဲ့ များရှိသည့် အနက်၊ ရွေးလက်ဝဲတပ်ဖွဲ့ အကြောင်း သမိုင်းစာအုပ် စာတန်းများ မတွေ့ ရသေးပါ။
သို့ သော် သီဟိုဠ်နွယ် ရာဇဝင် သုတေသီ ရွှေဘို မောင်ဘဦး (ဦးဘဦး) ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ သည့် “ရွှေမန်းရာပြည့် ရာပြည့်မွတ်စလင်များ“ စာအုပ်တွင် ဗမာဘုရင့် တပ်မတော်က ဗမာမွတ်စလင် တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်နှင့် သွေးသောက် ရဲမက်များ ပါဝင်သည့် တပ်ဖွဲ့အကြောင်းကို ဖတ်ရပါ၏။ သီပေါ မင်းလက်ထက် ဗမာ့တပ်မတော် မင်္ဂလာ အမြောက်တပ်က တပ်မှူး ဗိုလ်ဘိုးကာ၏ မြစ်ဖြစ်သော ကျွှန်တော့ မိတ်ဆွေက မူရင်း စာအုပ်ကို ပေးဖတ် သဖြင့် ဖတ်ရှုရပါသည်။ ထိုတပ်ဖွဲ့ များသည် ဗမာတို့ ၏ အမျိူး ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သူများထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာသည့် အတွက် မင်းတုံးမင်းတရားကြီး ၅ ကြိမ်မြောက် သင်္ဃာ ရတနာတင်နိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် က သမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်ပါ၏။ ဘာသာပေါင်းစုံကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသော ဗမာများ ပါဝင်ခဲ့ကြ မည်ဟု ထင်ရပေသည်။တပ်မှူး ဗိုလ်ဖိုးကာ သည် မင်းလှခံတပ်မှ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ တို့ ကို ခုခံတိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ ပါသည်။
ဗမာဘုရင့် ကာကွယ်ရေး တပ်မကြီးအား စလေမြို့ စားမင်း ကို ယုံကြည်စွာ အပ်နှံတာဝန်ပေးခဲ့၏။ စလေမြို့ စားမင်း ဦးစီးလျက် စစ်ကြောင်းကြီး သုံးကြောင်း ချီတက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစစ်ကြောင်းကြီး သုံးကြောင်းမှာ၊
(၁) အောက်မြစ်စဉ်ရေကြောင်း တစ်ကြောင်း
(၂) တောင်တွင်းကြီးစစ်ကြောင်း တစ်ကြောင်း
(၃) တောင်ငူစစ်ကြောင်း တစ်ကြောင်း တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
တောင်တွင်းကြီးစစ်ကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ဦးစီး ချီတက်ခဲ့ သည့် တပ်မှူးကြီးမှာ မင်းကြီးမဟာ မင်းထင်ရာဇာ ဗိုလ်ချုပ် ဦးချုံ ဖြစ်ပါသည်။
တပ်မှူးဗိုလ်ဘ်ိုးကာနှင့် ပင်လယ်မြို့ စားမင်း မင်းကြီးမဟာ မင်းဒင်ရာဇာ ဦးချုံ တို့ နှစ်ဦးမှာ တိုင်းရင်းသား ဗမာ မွတ်စလင်များ ဖြစ်ပါသည
ကျွှန်တော်သည် သုတေသီ တို့ မှာ တာဝန်ရှိသည့် အလျှောက် ခေတ်ပြိုင် သမိုင်း ဆရာတို့ ၏ သမိုင်း များ ကို ရှာဖွေ ခဲ့ ပါ သည်။အောက်ဖော်ပြပါတို့ က သမိုင်း သုတေသီ တို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရ သည် အကြောင်းများဖြစ်ပါ၏။
သို့ ဖြစ်ရာ လွန်ခဲ့သော (၂) နှစ်ခန့် က အနည်းငယ်ဖတ်ထား သော Thant Myint-U’s “The River of Lost Foot Step” ကိုပြန်ငှားပြီး ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။သူ့အရေးအသားမှာ အင်္ဂလိပ် (သို့ ) ဗြိတိန် နိုင်ငံသား တဦး၏ ရေးဟန်ကို သတိထားမိပါ၏။ ထားပါတော့ လိုရင်းတို ဆွေးနွေးပါမည်။ သူ့စာသား အတိုင်း အောက်တွင် ဖော်ပြပါမည်။
“Command of the kingdom’s defenses was entrusted to the lord of Salay. Three columns were mustered; the Lower Irrawaddy Column, under the cavalry general Mingyi Thiri Maha Zeyya Kyawdin, recently returned from campaing along the Chinese border; the Great Valley Column, underacolonel of the Cachar Horse Regiment, Mingyi Minkaung Mindin Raza; and the Toungoo Column, under the colonel of the Shwaylan Infantry Regiment, Mingyi Maha Minkaung Nawrata. (p11; Thant Myint-U)“
ဦးဘဦး စာအုပ်တွင် တွေ့ ရသည်နှင့် အနည်းငယ် ကွဲလွဲသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။ စလေ မြို့ စားက လှေ အတွင်းဝန် လက် ဝဲ ဝင်းတော် မှူး မင်းကြီး သိ ရီ မဟာ ဇေ ယျကျော် ထင် ဖြစ်ပါသည်။ colonel of the Cachar Horse Regiment,= အက်ကပတ်မြင်းဝန် ဆို သည်မှာလည်း ဦးချုံ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်မင်း ဦးချုံ သည် ပင်လယ်မြို့ စားလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရင့်ချီးမြင့်ထား သည့် ဘွဲ့ များမှာ မင်းကြီး မဟာ မင်းဒင်ရာဇာ ဟုတွေ့ ရ ပါသည်။ Minkaung မပါ ပါ။ သို့ သော်တောင် တွင်းကြီး စစ် ကြောင်း ကို တပ် မင်း အဖြစ် ဦး စီးကာ ချီ တက် ရ တဲ့ တာ ဝန် အပ် နှင်း ခံ ရ တာ မို့ဦး ချုံ ဆို တာ သေ ချာ ပါ သည်။ ( ဆရာ မကြီး ဒဂုံ ခင်ခင် လေး ၏ ရတနာပုံ နိဒါန်း နှင့် နိ ဂုံး၊ စာ-၅၆၁ တွင် လည်း အက္ကပတ်မြင်း ဝန် မင်လယ်မြို့ စား မင်းကြီး မဟာမင်းထင် ရာ ဇာ ) လို့ဆို ပါ သည်။ တောင်တွင်းကြီး စစ်ကြောင်း ကို Taung-twin-gyi Column ဟုမရေးဘဲ the Great Valley Column ဟုရေးခြင်းမှာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ပါသနည်း။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးဖွား ရာ နတ်မောက် အနီးက တောင်တွင်းကြီးကို Thant Myint-U မသိတာ ဘဲလား။ ထားပါတော့။
မှီငြမ်း- (၁) သီဟိုဠ်နွယ် ရာဇဝင် သုတေသီ ရွှေဘို မောင်ဘဦး (ဦးဘဦး) ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ သည့် “ရွှေမန်းရာပြည့် ရာပြည့်မွတ်စလင်များ“
(၂) ဒေါ် ဒဂုံ ခင် ခင် လေး ၏ ( ရတနာပြံ နိ ဒါန်း နှင့် နိဂုံး ။)
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 11:45 PM